मोदीले रोक्न सकेनन् एमाले–माओवादी एकता - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०८:२३
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणसँगै विभिन्न अड्कलबाजी गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक थियो– मोदीले एमाले–माओवादी एकता भाँड्न रोल खेल्नेछन् ।
तर, धेरैले अनुमान गरेविपरित बुधबार एमाले–माओवादीले सप्राइज दिए । र, आज बिहाीबार पार्टी एकता हुने निश्चित भएको छ । कतिपयले यसलाई मोदीले पार्टी एकता रोक्न प्रयास गरेको तर, नसकेको रुपमा समेत लिएका छन् ।